Mijery ny Birao Afrikana fizahan-tany miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny firenena 26
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mijery ny Birao Afrikana fizahan-tany miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny firenena 26
The Birao fizahantany afrikanina dia fiaraha-miasa amin'ny daholobe sy tsy miankina miaraka amin'ny hafatra iray matanjaka. Ity hafatra ity dia ny hilazana amin'izao tontolo izao fa lasa toeran-tokana i Africa Tour ary misokatra malalaka ho an'ny orinasa. Kaontinanta azo antoka i Afrika ary mandray ny mpizahatany, ny fampiasam-bola ary ny fiaraha-miasa amin'ny tanana malalaka. Africa Birao fizahan-tany koa dia miarahaba ireo mpitarika fizahan-tany manerana an'i Afrika sy ny eran'izao tontolo izao amin'ny sandriny malalaka hitondra fitarihana, fanavaozana ary fampiasam-bola.
Tsapan'ny mpitarika ny fizahantany fa hitarika hiara-maniry i Afrika. Miala amin'ny politika sy misarika ny mpitondra fizahan-tany hanatevin-daharana ity sehatra vaovao ity hanapaka ny fifanenjehana. Ny birao fizahantany afrikanina dia ny fampitomboana ny orinasa, fampiasam-bola ary fanentanana tsara ho an'ny kaontinanta hadino matetika.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpanohana voalohany sy mpikambana mpanorina, Ny vondrona iFREE any HongKong dia orinasa manerantany mamelona fomba vaovao hifandraisana hatrany amin'ny tontolon'ny fivezivezena sy ny fifandraisana an-telefaona.
Manomboka amin'ny antso iraisam-pirenena sy ny vahaolana momba ny roaming data mankany amin'ny fifandraisana Wi-Fi sy ny vokatra fitsangatsanganana tokana dia nametraka tanjona ny vondrona iFREE handrava ireo sakana ary hampifanakaiky an'izao tontolo izao, ary tena ao anaty fandaharam-potoanan'izy ireo i Afrika.
Ny vaovao niforona Birao fizahantany afrikanina dia miorina amin'ny fandraisana andraikitra farany napetraky ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP)
Tia an'i Afrika ny haino aman-jery momba ny dia ary hita izany. Tao anatin'ny iray volana dia tonga ny mpanao gazety sy ny fanontana avy amin'ny vazan-tany rehetra naman'ny media manohana ny Birao Afrikana momba ny fizahantany.
Vao iray volana monja ny Birao Fizahan-tany momba ny fizahantany any Afrika ary efa niantso antso ho an'ireo mpikambana mpanorina. Misy ny dinika mavitrika. Androany dia efa nandray mpikambana vaovao 100 ny Birao fizahantany afrikanina ary maro hafa no maniry ny ho mpisava lalana amin'ity hetsika ity ho an'i Afrika, ny Afrikana miaraka amin'ny fanohanan'izao tontolo izao.
Amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo mpikambana tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ny Africa Tourism Board (ATB) dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanja ary ny kalitaon'ny dia sy fizahantany mankany-avy-sy-ao Afrika.
The Fiarovana sy fiankinan-doha amin'ny fizahantany ATBt any Sierra Leone ary nikasa ho an'ny firenena telo hafa.
PR & Marketing, fanentanana amin'ny haino aman-jery
Fandraisana anjara amin'ny seho varotra
Fampisehoana USA Road
Ireo mpikambana dia voasoratra anarana any amin'ireto firenena manaraka ireto:
Kongo (Rep ny)
ATB dia eo am-panaovana fanambarana ny birao voalohany an'ny Mpitondra Fizahan-tany Afrikanina ary eo am-pamolavolana ny hetsika mitohy ataon'ireo mpiara-miasa amin'ny fizahan-tany afrikanina hafa ao anaty tafon-trano iray.
Efa natomboka ny fikarohana CEO iray ary mamaly ny olo-malaza fizahantany.
Efa lavitra ny fikambanana ny fanambarana voalohany navoakan'i eTurboNews amin'ny April 6, 2018.
Mbola mitohy ny fikarohana ireo mpikambana mpanorina ny fizahan-tany any Afrika.
Mora ny miditra amin'ny ATB. Tsidiho fotsiny www.africantourismboard.com ary tsindrio eo manantona anay ho member.
Keflavik mankany Delhi dia mampifandray an'i Islandy sy India amin'ny WOW
Egypt - Roma: paikady mandresy fizahan-tany